दसैंमा खसी, घरै बसीबसी यसरि ल्याउनुस – Rapti Khabar
काठमाडौं, असोज २५ तपाईं दसैंमा खसी किन्न कहाँ जानुहुन्छ?
कलंकीको खसी बजार? टुकुचाको बजार? कि घर नजिकैको चोक? अब यस्तो झन्झट बेहोर्नु नपर्ने भएको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको डरले अधिकांश मानिस घरबाट निस्कन डराइरहेको अवस्थामा श्रीराम ग्रुप अन्तर्गतको अनलाइन खसी डटकमले ग्राहकको घरमै जिउँदो खसी पुर्याउने सुविधा ल्याएको छ।
दसैं लक्षित यो सेवा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मात्र उपलब्ध हुने कम्पनीका बजार व्यवस्थापक ईश्वर ढकालले जानकारी दिए।
‘दसैंमा खसी, घरमै बसी–बसी भन्ने हाम्रो नारा छ। हामी ग्राहकको माग अनुसारको स्वस्थ खसी घरमै पुर्याउँछौँ,’ उनले भने।
सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रामेछाप, उदयपुरमा स्थानीय कृषकले पालेका लोकल खसी अनलाइन खसी डटकममार्फत खरिद गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ।
कृषकबाट खसी खरिदअघि कम्पनीको भेटेरिनरी चिकित्सकले त्यसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र स्वस्थ रहेको यकिन भएपछि मात्रै किनेर ग्राहककोमा पुर्याउने कम्पनीको दावी छ।
कसरी गर्ने बुकिङ?
कम्पनीकाे वेवसाइटमा जाने। त्यो पेजको माथि दायाँपट्टी लेखिएको ‘क्विक बुक’ अप्सनमा क्लिक गर्ने।
त्यहाँ नाम, फोन नम्बर, इमेल, खसीको तौल, ठेगाना, खसी डेलिभरी गर्ने दिन लगायत विवरण भरेर सबमिट गर्ने।
त्यसपछि अनलाइन खसीका प्रतिनिधिले ग्राहकको अपेक्षा अनुसारको मिल्दोजुल्दो खसी आफ्नो फार्ममा खोज्छन् र ग्राहकलाई खसीको तौल, रङ लगायत जानकारी दिएर फोटो पठाउँछन्।
उनीहरुले पठाएको फोटो हेरेर ग्राहकले आफ्नो बुकिङ गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै ग्राहक आफैंले हेर्न चाहे पनि फार्ममा गएर हेर्न पाउने ढकालले जानकारी दिए।
ग्राहकले बुकिङको लागि २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार तिरेर ईसेवा, खल्ती एपबाट वा आफैंले नगद दिएर बुक गर्नु पर्नेछ। बाँकी पैसा ग्राहकले खसी डेलिभरी गर्दा तिर्न पाउने छन्।
बुक गरिसकेपछि ग्राहकले तोकेको दिन अनलाइन खसीका प्रतिनिधिले घरमै खसी ल्याइलिने उनले बताए। कम्पनीले खसीको मूल्य प्रतिकेजी ७ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ।